FITOKANANA KAOMISARIA VAOVAO : MIEZAKA NY MANAKAIKY NY VAHOAKA HATRANY NY POLISIM-PIRENENA 12 octobre 2018
FITONDRANA AM-BAVAKA NY FIRENENA 9 octobre 2018
Archives Articles Sélectionner un mois octobre 2018 (8) septembre 2018 (11) août 2018 (12) juillet 2018 (16) juin 2018 (13) mai 2018 (31) avril 2018 (38) mars 2018 (43) février 2018 (42) janvier 2018 (38) décembre 2017 (43) novembre 2017 (66) octobre 2017 (23) septembre 2017 (5) août 2017 (1) juillet 2017 (5) juin 2017 (4) mai 2017 (9) avril 2017 (3) mars 2017 (7) décembre 2016 (15) novembre 2016 (12) octobre 2016 (4) septembre 2016 (11) août 2016 (24) juillet 2016 (19) juin 2016 (18) mai 2016 (20) avril 2016 (20) mars 2016 (19) février 2016 (19) janvier 2016 (9) décembre 2015 (6) novembre 2015 (15) octobre 2015 (11) septembre 2015 (1) août 2015 (4) juillet 2015 (6) juin 2015 (7) mai 2015 (13) avril 2015 (11) mars 2015 (7) février 2015 (3) janvier 2015 (2) décembre 2014 (1) novembre 2014 (5) octobre 2014 (4) septembre 2014 (20) août 2014 (25) juillet 2014 (19) juin 2014 (15) mai 2014 (11) avril 2014 (8) mars 2014 (13) février 2014 (13) janvier 2014 (7) novembre 2013 (4) octobre 2013 (11) septembre 2013 (15) août 2013 (4) juillet 2013 (17) juin 2013 (10) mai 2013 (12) avril 2013 (12) mars 2013 (19) février 2013 (13) janvier 2013 (18) décembre 2012 (4) novembre 2012 (2) octobre 2012 (12) septembre 2012 (3) août 2012 (10) juillet 2012 (16) juin 2012 (7) mai 2012 (11) avril 2012 (15) mars 2012 (9) février 2012 (1)
KAOMISARIA BORIBORINTANY FAHAROA: 8 LAHY VOASAMBOTRY NY POLISY
Paikady vaovao no nataon’ny Kaomisaria ny boriborintany faharoa hitandroana ny filaminana eny amin’iny faritra iadidiany. Tamin’ity volana oktobra ity dia 8 lahy mpanao asa ratsy sy mpampihorohoro iny faritra iny no voasambotry ny polisy: Ny 3 lahy voalohany dia tatra ambodiomby teny AMBOHIPOTSY teo am- pamonoana miaro endaka tamina mpifankatia. Ny roalahy indray dia tra-tehaka …
Fametrahana galona ho an’ireo Polisy miisa 126 mianadahy.
Notanterahana tao amin’ny Toby Contrôleur General de Police RAZAFINDRAZAKA Berhin Antanimora ny 12 oktobra 2018 tamin’ny 10 ora maraina ny fametrahana galona vaovao ho an’ireo Polisy miisa 126 mianadahy. Mitsinjara ho toy izao avy ny galona azon’izy ireo : • Commisaire Divisionnaire de Police miisa 01. • Commissaire de Police miisa 16. • Officier de …
POLISY TAO AMIN’NY FARITRY MANJA: DAHALO 02 NO MATY ARY OMBY 120 KOSA TAFAVERINA AMIN’NY TOMPONY
Ny zoma faha-5 oktobra 2018 tokony ho tamin’ny 5ora maraina dia nisy dahalo miisa 30 nirongo basy nanafika tao Andranolava Ambony distrika ao Manja. Lasan’ireo tamin’izany ny omby miisa 120 an’i Atoa FAGNOVOA. Niantso vonjy tamin’ny Polisy teo an-toerana ny niaram-boina ka avy hatrany izy ireo dia nandray ny andraikiny niaraka tamin’ny fanampian’ireo malala tanana …
FITOKANANA KAOMISARIA VAOVAO : MIEZAKA NY MANAKAIKY NY VAHOAKA HATRANY NY POLISIM-PIRENENA
Taorian’ny fitokanana ny kaomisaria vaovao tao Mandoto dia notanterahina ny Sabotsy faha 06 Oktobra 2018 lasa teo ny fitokanana ny Kaomisaria vaovao tao Manongalazo Antsiranana. Tonga nitokana izany ny Minisitry ny Filaminam-bahoaka ny Inspecteur général de Police Eric Michel Wouli Soumah Idrissa sy ireo mpiara-miasa aminy. Tafiditra tanteraka ao anatin’ny fanatanterahana ny vinan’ny Ministera ho …
FITONDRANA AM-BAVAKA NY FIRENENA
Nanatanteraka antsam-piderana ho an’ny firenena ny Polisim-pirenana malagasy ny Sabotsy 06 Octobra 2018 lasa teo teny amin’ny toby Contrôleur General de Police RAZAFINDRAZAKA Berthin Antanimora . Amin’izao fotoana ankatoky ny fifidianana izao dia nisy ny fitondrana am-bavaka nataon’ny Polisim-pirenena tamin’ny alalan’ny antsam-piderana ho mariky ny fitiavan-tanindrazana. Fotoana ihany koa nanehoana fa tsy miandany na amin’iza …
KAOMISARIA BORIBORINTANY FAHAROA: 8 LAHY VOASAMBOTRY NY POLISYFametrahana galona ho an’ireo Polisy miisa 126 mianadahy.POLISY TAO AMIN’NY FARITRY MANJA: DAHALO 02 NO MATY ARY OMBY 120 KOSA TAFAVERINA AMIN’NY TOMPONYFITOKANANA KAOMISARIA VAOVAO : MIEZAKA NY MANAKAIKY NY VAHOAKA HATRANY NY POLISIM-PIRENENAFITONDRANA AM-BAVAKA NY FIRENENA
FANAFIHANA MITAM-PIADIANA TENY ANTSAHAVOLA
Ny 10 septambra 2018 dia naharay fampandrenesana fanendahana mitam-piadiana tamina teratany Sri-lankais iray izay nahaverezana volamena 5,360kg ny Brigade Criminelle. Tamin’io fotoana io ihany koa dia nahazo fanambarana ny Polisy fa misy fiara mampiahiahy nilaozana eny Antsahavola. Niainga teo dia nanao ny fitsirihina ny Polisy mpanao famotorana ka nahafantatra fa misy ifandraisana tanteraka ireo. Ny …
Lien Permanent pour cet article : http://www.policenationale.gov.mg/?p=11927
VEHIVAVY ROA SY LEHILAHY IRAY MISOLOKY HO DOKOTERA NO VOASAMBOTRY NY POLISIN’NY PMPM NOHON’NY RESAKA FANGALARAN-JAZA
Isan’ny tranga niseho matetika tato ho ato teto an-drenivohitra ny fahaverezana zaza vao teraka. Manoloana izany dia mandray ny andraikiny ny Polisy hitedavana ireo zaza very. Lehilahy iray sy vehivavy roa no voasambotry ny Polisin’ny PMPM (Police des Mœurs et de la Protection des Mineurs) tetsy Avaradoha sy Analamahitsy ny Alarobia 12 Septambra lasa teo …
Lien Permanent pour cet article : http://www.policenationale.gov.mg/?p=11904
MITOHY NY EZAKA HATAON’NY POLISIM-PIRENENA : TELO LAHY NIKONOKONONA HANAO FANAFIHANA MITAM-PIADIANA LAVON’NY SAG
Fandravana ireo tambazotrana andian-jiolahy eto an-drenivohitra : Tsy mitsitsy ny Polisy amin’ny fidirana an-tsehatra. Omaly Talata 12 septembra tokony ho tamin’ny 6 ora hariva dia 03 lahy no lavon’ny balan’ny Polisy avy ao amin’ny SAG na « Service Central Anti-Gang » teny akaikin’ny « Solimotel » Anosy. Andian-jiolahy efa nahazon’ny Polisy vaovao izy ireto : …
Lien Permanent pour cet article : http://www.policenationale.gov.mg/?p=11894
MIEZAKA MANADIO NY FARITRA HIADIDINY NY POLISIN’NY BORIBORINTANY FAHAEFATRA ETSY ISOTRY : MPANAO RATSY 08 NO VOASAMBOTRA TAO ANATIN’NY FOTOANA FOHY
Rehefa nihaino ny fitarainan’ny olona ny Polisin’ny boriborintany fahaefatra dia nanao ny paik’ady rehetra hisamborana ireo mpanao ratsy eny amin’ny faritra hiadidiny. Ny voalohany amin’izany dia ny eny amin’ny CENAM 67ha : (04) dahy no voasambotra teny amin’iny faritra iny nohon’ny fanomezam-baovao avy amin’ny olona tsara sitrapo ; Tao ihany koa ny fisamborana mpanendaka iray …
Lien Permanent pour cet article : http://www.policenationale.gov.mg/?p=11887
VONO OLONA TENY AMIN’NY GASTRO BY-PASS: TSY MIPETRA-POTSINY NY POLISY MANOLOANA IREO MPANAO RATSY, 6 IREO OLONA VOASAMBOTRA.
Nanao izay ho afany ny Polisin’ny FIP sy ny BC nikarohana ireo jiolahy mpamono olona izay nanafika teny amin’ny Gastro Pizza By-Pass ny 27 Aogotsitra lasa teo. Nisy vokany izany ezaka izany satria tra-tehaka ireo navanona ny loza . Ny 29 aogositra 2018 rehefa nandeha ny fanadihadiana nataon’ny Polisy dia misy olona atao hoe PASCAL …
Lien Permanent pour cet article : http://www.policenationale.gov.mg/?p=11884
MPIVAROTRA COCAINE SY HEROINE: VOSAMBOTRY NY POLISIN’NY “STUPEFIANT” NY TERATANY AFRIKANINA IRAY
Mitohy hatrany ny ezaka ataon’ny Polisy misahana ny ady amin’ny zava-mahadomelina na ny “STUP” etsy Anosy. Taorian’ny fahatratrarana rongony 30 kitapo dia tra-tehaka ihany koa ny teratany afikanina iray mpivarotra COCAINE sy HEROINE eto an-drenivohitra. Ny 25 aogositra 2018 no nivarotra izany « Drogue » izany amina olona ao anatin’ny hotely lehibe iray teto an-drenivohitra ity teratany …
Lien Permanent pour cet article : http://www.policenationale.gov.mg/?p=11881
FANDEFASANA VEHIVAVY ANY CHINE : TAMBAZOTRA LEHIBE IRAY NO RAVAN’NY POLISY AVY AO AMIN’NY « ENQUETE SPECIALISE »
Tambazotra mpandefa vehivavy an-tsokosoko any Chine no voaravan’ny Polisim-pirenena avy ao amin’ny enquête specialisé Anosy ny alatsinainy faha 27 aogositra 2018 teo ka olona dimy no voasambotra tamin’izany. Efa an-taonany maro ity tambazotra ity no nandefa vehivavy any Chine, ary efa maro ireo vehivavy no nahondrany any. Raha ny fantatra dia mampanantena izy ireo fa …
Lien Permanent pour cet article : http://www.policenationale.gov.mg/?p=11878
FILAZANA AVY AMIN’NY « SERVICE PASSEPORT »
Ny « Service Passeport » eto Anosy Antananarivo dia mampandre antsika izay hanamboatra izany fa tapaka ny fanomezana « passeport » nanomboka ny zoma alina31 Aogositra lasa teo nohon’ny olana ara-teknika. Araka izany dia miato ny famoahana azy ary hotaterina eto amin’ny Pejin’ny Polisim-pirenena ny fiverenan’izany rehefa miverina amin’ny laoniny ny fanamboarana « passeport » …
Lien Permanent pour cet article : http://www.policenationale.gov.mg/?p=11875
RONGONY SAIKA HAPARITAKA ETO AN-DRENIVOHITRA: VOSAMBOTRY NY POLISIN’NY STUP NY DIMY LAHY TOMPON’ANTOKA TAMIN’IZANY.
Rongony miisa 30 kitapo ary milanja 300 kilaos , ireo no tratehakin’ny Polisy misahana ny ady amin’ny zava-mahadomelina na ny Stup etsy Anosy teny Alakamisy Fenoarivo tokony ho tamin’ny 10 ora alina . Vaovao avy amina olona tsara sitra-po no nahafantaran’ny Polisy fa misy olona mikasa hitondra rongony aty an-drenivohitra eny amin’iny faritra Alakamisy Fenoarivo …
Lien Permanent pour cet article : http://www.policenationale.gov.mg/?p=11871
FANENDAHANA MIARAKA AMIN’NY ANTSY LAVA : DIMY LAHY NO VOASAMBOTRY NY POLISIM-PIRENENA
Mitohy hatrany ny ezaka ataon’ny Polisy entina mifehy ny tsy fandriam-pahalemana eto an-drenivohitra. Mpanendaka dimy lahy miaraka amin’ny Antsy lava no voasambotra tamin’izany. Tra-tehakiny Polisin’ny boriborin-tany fahaenina teny amin’ny Rocade Andohatampenaka ny roalahy teo am-panaovana ny asa ratsiny ary mbola hita teny amin’izy ireo ny entana izay nangalariny miaraka amin’ny Antsy lava izay nampiasain’ireto farany …
Lien Permanent pour cet article : http://www.policenationale.gov.mg/?p=11868